HTC ရောင်းအားသည်အရှုံးနှင့်ရင်ဆိုင်ရသည် Androidsis
HTC သည်အကောင်းဆုံးအချိန်ကိုဖြတ်သန်းနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ ထုတ်လုပ်သူသည်၎င်း၏သမိုင်းတွင်အကြီးမားဆုံးသောစီးပွားရေးအကျပ်အတည်းကိုခံစားနေရသည်။ ၎င်းတို့သည်တစ်ခုတည်းကိုသာလိုလားသည်။ ဤကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော ၂၀၁၅ အဆုံးသတ်တော့သည်။ပထမသုံးလပတ်တွင်၎င်းတို့သည်မဖြစ်စလောက်အကျိုးခံစားခွင့်များကိုတင်ပြခဲ့သည် အခုအခြေအနေကပိုဆိုးလာတယ်။ တရား ၀ င်အရှုံးပေါ်စေခြင်းငှါ HTC ကဒေါ်လာ ၂၅၂ သန်းအတိအကျသတ်မှတ်
၎င်းသည် CFO နှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ HTC ရောင်းချမှုအကြီးအကဲ Chialing Chang ဖြစ်ပြီး၎င်းကိုရှင်းပြခဲ့သည်တင်ပြဘဏ္financialာရေးအစီရင်ခံစာမကောင်းဘူး နောက်လာမယ့်သုံးလပတ်ကပိုကောင်းလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူး။
ဖြေရှင်းချက်များကို HTC စတင်ရှာဖွေသည်
ချန်ကသူတို့ဟာအသွင်ကူးပြောင်းရေးအဆင့်မှာရှိနေပြီးအရောင်းအ ၀ ယ်ဆင်းရဲနေရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဟာအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့အကြောင်းပြချက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခြင်းအားဖြင့်သူကိုယ်တိုင်ဆင်ခြေပေးခဲ့သည် အဖြေ? ၎င်းတို့ကိုထိပ်ဆုံးသို့ပြန်ပို့နိုင်သည့်ပိုမိုဖက်ရှင်ကျသည့်ဖုန်းများတီထွင်ခြင်း။
အမှန်တရားမှာ Chang ၏သတင်းစကားသည်ပျော်ရွှင်မှုထက် ပို၍ သံသယဖြစ်စေသည်၊ ပို၍ ဖက်ရှင်လား။ ၎င်းတို့တွင်အခြားအရာတစ်ခုရှိလိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်း One range ၏အားသာချက်များထဲမှတစ်ခုမှာ၎င်း၏ထုတ်ကုန်များ၏ဒီဇိုင်းနှင့်ဖုန်းများ၏ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်သည်။ Y အဲဒီအသေးစိတ်ဟာလူထုကိုဆွဲဆောင်ဖို့မလုံလောက်သေးပါဘူး
HTC သည် Huawei နှင့် Xiaomi ကဲ့သို့ဟဲဗီးဝိတ်များနှင့်တရုတ်ဈေးကွက်တွင်အလယ်အလတ်တန်းစားပြိုင်ဆိုင်မှုကိုစတင်ယှဉ်ပြိုင်လိုနေသည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုကောင်းစွာမထင်မှတ်သော်လည်း၎င်းသည်၎င်းတို့အတွက်မည်သို့အကျိုးရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့လိမ့်မည်။ သူတို့ HTC မှပြုလုပ်မည့်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည် ကုန်ကျစရိတ်များလျှော့ချခြင်းနှင့်အမြတ်အစွန်းတိုးမြှင့်။ အလုပ်ပြုတ်ခြင်းကို HTC သို့လာသည်ဟုဆိုလိုပါသလား။ ယခု မှစ၍ ထိုအကြောင်းကိုအဘယ်သူမျှမပြော။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့ရဲ့ထောက်ခံမှုရှိသည် Re Vive မှတဆင့် virtual reality သို့ HTCသူတို့ Valve နှင့်အတူထွက်သယ်ဆောင်နေသောစိတ်ဝင်စားဖွယ်စီမံကိန်း။ ဒီနေရာမှာသူတို့ဟာ virtual reality စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကအလွန်ကောင်းတဲ့အလားအလာရှိတဲ့အတွက်ခြစ်ရာတစ်နေရာရနိုင်မယ်ဆိုရင်။
HTC ၏မိုဘိုင်းဌာနခွဲ၌ကျွန်ုပ်တွေ့ရသောပြproblemsနာများသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ တစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏ရှေ့မှောက်တွင်ထင်ရှားသောအချက်တစ်ချက်ရှိသည်။ Sony သည်အလားတူပြုမူမှုမှန်ကန်သော်လည်း၊ အနည်းဆုံးဂျပန်ထုတ်လုပ်သူသည်အငယ်စားအပိုများကိုအမြဲပေးသည်။ မဟုတ်ပါဘူး HTC နှင့်၎င်း၏ HTC One M9 ဒီဇိုင်းပုံစံကို၎င်း၏ရှေ့ပြေးများနှင့်ကင်မရာအထက်တွင်ဒီဇိုင်းဆွဲထားသည်နှင့်၎င်း၏ပြိုင်ဘက်များနှင့်အဝေးမှပင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
အခြားကြီးမားသောအားနည်းချက်မှာအလယ်အလတ်တန်းစားဖြစ်သည်။ HTC သည်၎င်း၏အလယ်အလတ်တန်းစားများကိုဤမျှမြင့်မားသောစျေးနှုန်းဖြင့်မရောင်းနိုင်ပါ။ သူတို့ကစျေးနှုန်းကိုလျှော့ချဖို့မစတင်ဘူးဆိုရင်, သူတို့သည်နည်းနည်းလုပ်နိုင်လိမ့်မည်။ တယ်လီဖုန်းစျေးကွက်ကဒုတိယအခွင့်အရေးကိုမရပါဘူး။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » HTC သည်ဆိုးရွားသည့်ဘဏ္newာရေးဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာအသစ်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အဖြေ? ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိသောစမတ်ဖုန်းမျိုးဆက်သစ်
eleriic ™ (@ aleric10) ဟုသူကပြောသည်
Terminal များသည်ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးဖြစ်သည်။ htc ကိုပြောင်းလဲရမည့်အချက်မှာစျေးနှုန်းမူဝါဒဖြစ်သည်
eleriic ™ကိုပြန်သွားပါ (@ aleric10)
အော့ဖ်လိုင်းကစားနိုင်သည့် multiplayer video games ၇ ခု